Sida Loo Isticmaalo Clip-yada Apple si Loo Sameeyo Muuqaalo Cajiib ah oo Xiiso badan | Wararka IPhone
Sida Loo Isticmaalo Clip-yada Apple si Loogu Sameeyo Fiidiyowyo Cajiib ah
Intii lagu jiray bishii la soo dhaafay ee Maarso, Apple waxay na tustay codsi cusub oo noo oggolaanaya inaan abuurno fiidiyowyo gaar ah, sidaas awgeedna ku biiraya isbeddellada Facebook, Instagram iyo Snapchat si loogu daro wararka heerka software-ka ee na siinaya fursad aan ku kala soocno waxyaabaha ku jira warbaahinta bulshada. Apple way ogtahay inaysan jirin wax faafin oo ka wanaagsan tiro aad u tiro badan oo isticmaaleyaal ah oo ka faa'iideysanaya Clip-yada iyada oo loo marayo sheekooyinka Instagram, oo la sheegay lana qabtay. Si kastaba ha noqotee, Clips waa dheeman ku jira waxyaabo badan oo badan, sidaa darteed, waxaan dooneynaa inaan kaa dhigno cashar weyn oo ku saabsan waxa Clips clips u shaqeeyaan iyo sida aad ugu abuuri karto waxyaabo xiiso leh oo dhab ah.
Marka, fadhiiso oo dib u cusbooneysii baterigaaga maxaa yeelay waxaad noqon doontaa khabiir Clips oo dhab ah, waxaad abuuri doontaa fiidiyowyadii ugu qosolka badnaa oo aad sawirradaada sida ugu habboon ugu xallin doontaa mahadsanid casharkeena. Aan tagno qaybo, ka faa'iideysano tusmada si aan uga boodno shaqooyinkaas aad horeba ugu ogayd qalbiga oo aan toos ugu tagno kuwa aad aadka u xiisaynaysid, diyaar, u dhigay… Hada!
1 Horta, waa maxay Clips?
2 Marka ugu horeysa ee lala xiriiro Clips
3 Sideen ugu darsadaa qoraal isku mar ah (Cinwaanada Tooska ah) ee Clips video / sawir ah?
4 Sideen ugu dari karaa shaandheeyeyaasha Clips video ama sawir?
5 Sidee loogu daraa istiikarada iyo emojis-ka fiidiyow / sawir laga soo qaaday Clips?
6 Sideen ugu daraa codadka iyo heesaha fiidiyowyadeyda Clip?
7 Wanaagsan, waan haystaa, hadda… Sideen ula wadaagi karaa curiyayadeyda Clips?
8 Khiyaamada si aad uga sii baxdo Clips
Horta, waa maxay Clips?
Clips waa habka Apple ay u go'aansatay inay magacawdo codsi fudud oo fiidiyow, maqal iyo sawir ah. Codsigu wuxuu na siin doonaa waxyaabo ka yar intii aan ku haysan lahayn Sheekooyinka Instagram, tusaale ahaan, si kastaba ha noqotee, Waa aalad xoogaa ka xoog badan, marka waxaan ku dari karnaa shaandhooyin xoogaa la yaab leh, iyo wixii ka sarreeya, waa hab lagu kala saaro nooca nooca ku jira Shabakadaha Bulshada ee lagu wadaago iPhone-ka, iyadoo la adeegsanayo miirayaasha gaarka ah iyo kuwa gaarka ah. Sidee bay noqon kartaa haddii kale, istiikarada iyo dhul-dhisiddu waxay qayb muhiim ah ka yihiin waxyaabaha aan abuurno.
Codsiga gabi ahaanba waa bilaash waxaana laga heli karaa macruufka App Store, si aad u hesho kaliya ka soo dejiso adoo adeegsanaya xiriirka aan kaaga tagay bilowga qeybtaan. Si kastaba ha noqotee, waxaan ka faa'iideysaneynaa fursad aan ku xusuusinno in Clips uusan ku shaqeyn doonin qalab kasta oo aan lahayn processor-ka x64 ama IOS 10.3, marka, Waxaad ku ordi kartaa oo kaliya dhammaan moodooyinka iPhone-ka ee ka socda iPhone 5s, iyo dhammaan moodooyinka iPad-ka ee laga helo iPad Air, iyo sidoo kale iPod Touch 6th G.
Marka ugu horeysa ee lala xiriiro Clips
Si fudud, sida had iyo jeer ku jirta alaabada Apple, sahlanaanta isticmaalka ayaa adkaata. Marka aan furno Clips, waxaan haynaa seddex hawlood oo aan ku dooran karno ilaha wax laga beddelayo:
¿Sideen ku qabtaa oo ugu tafatiraa sawir leh Clips? Tan awgeed, waxaad lahaan doontaa saddexda ikhtiyaar ee kor ku xusan badhanka qabashada, maaddaama ay ku dhacdo kamarad macruufka ah. Xulo xulashada Sawirka si aad u qaadatid sawir fudud. Markaa laba badhan oo kale ayaa ka soo muuqan doona midigta badhanka qabashada, midka dhaqaajinaya tooshka iyo midka lagu dooranayo kamaradda hore, sawir fiican.
Sideen ku qabtaa oo ugu tafatiraa fiidiyoow agabyo ah? Nidaam la mid ah sidii hore, markan waxaan gujin doonnaa ikhtiyaarka «Video» waxaanan arki doonaa sida badhan weyn oo casaan ah u muuqan doono oo u qoran "Ku hay rikoodhka", oo ka duwan kamaradda iOS, waa inaad xajisataa hoos ilaa inta aad rabto in ay sii socoto fiidiyowga. Bidixda badhanka weyn ee cas waxaan fursad u leenahay inaan codka ka aamusno, dhanka midigna bedelka kamaradda.
Sideen ugu tafatiraa sawir ama fiidiyoow Reel leh Clips? Ma seegi karno daabacaadda wixii hore loo kaydiyey, haddii ay dhacdo waxaan u qaadan doonnaa hawsha midigta, oo la yiraahdo Library, oo waxaan ku sii wadi karnaa wax ka beddelka.
Way fududahay in la doorto waxyaabaha aan qabaneyno ama aan ku dooranayno inaan wax kaga beddelno Clips. Laakiin intaas oo kaliya maahan, waan sii wadaynaa howlaha.
Sideen ugu darsadaa qoraal isku mar ah (Cinwaanada Tooska ah) ee Clips video / sawir ah?
Haa, waan duubeynaa, waxaana dooneynaa qoraal inuu soo muuqdo oo aan ku amreyno dalabka. Waa mid ka mid ah astaamaha ugu xiisaha badan ee Clips-yada oo halis ah, ugu yaraan midka u muuqda mid farsamo iyo soo jiidasho farsamo oo aad u xiiso badan. Tan waxaan u qabaneynaa fiidiyowga aan doorbidnay hore. Mar alla markii aan duubno, waxaan dooran doonnaa hawsha ugu horreysa bidix ee Clips. Marka ugu horaysa ee aan riixno, noocyada kala duwan ee Cinwaannada Tooska ah ee aan dooran karno ayaa furmaya, marka waxaan doorannaa midka in badan na qanciya.
Hadda waa inaan kaliya hoos u dhig isla badhanka weyn ee casaanka ah ee aan duubi jirnay kuna qorneyn qoraalka in aan dooneyno inaan ka soo muuqano fiidiyowga ama sawirka aan dooneyno inaan ku darno Cinwaanada Tooska ah.
Sideen ugu dari karaa shaandheeyeyaasha Clips video ama sawir?
Mid kale oo ka mid ah dhinacyada ugu xiisaha badan waa miirayaasha, shaqada labaad ee bidixda ka soo baxeysa runtii waa wax xiiso leh. Waa run oo weli mawduuc badan ma leh, laakiin filtarrada qaar sida Comic Book runtii waa qabow. Hadda waa inaan tagnaa tijaabinta dhammaan hoos-u-dhaca oo ah midka aan jecel nahay oo aan dooranno. Markii aan dooranay, waxaa lagu keydin doonaa Clip-ka la soo xulay, iyada oo aan dhibaato kale jirin, inta soo hartay isla markiiba way shaqeysaa.
Sidee loogu daraa istiikarada iyo emojis-ka fiidiyow / sawir laga soo qaaday Clips?
Waxaan aadeynaa Stickers, sida sheekooyinka Instagram, waxaan sidoo kale yeelan doonaa "Geolocation", taas oo macnaheedu yahay in waqti ka waqti aan arki doonno waxyaabo gaar ah oo ku xiran aagga aan ku suganahay. Waxaan sidoo kale heli doonaa ikhtiyaarka aan ugu beddeleyno cabbirkooda habka ugu fudud, markii aan doorano oo ay ka muuqato bartamaha shaashadda, waxaan riix doonnaa inaan u dhaqaaqno sidii markii waxaan dooneynaa inaan u dhaqaaqno astaanta loo yaqaan 'Springboard', si aan u weyneyno ama u yareynno waxaan kaliya oo aan ku qasbanaan doonnaa inaan faro-dheereeyo faraha ama aan isu soo dhowaano, wax aan macquul aheyn. Haddii aan ka baddalno bidix ilaa bidix, waxaan arki doonnaa liistada emojisyadii ugu dambeeyay ee aan adeegsannay oo aan weliba ku dari karno daabacaaddeenna.
Kaliya dhanka midig oo leh astaamaha «T» sidoo kale waxaan leenahay entradillas, daahyada noo oggolaan doona inaan ku muujino qaab shineemo ahaan ka badan waxa aan uga jeedno. Waxaan si fudud ku dooran doonnaa oo riixista qoraalka ayaa noo oggolaan doonta inaan wax ka beddelno, si ay u sheegto waxaan dooneyno, sida aad ku arki karto sawirka kore.
Sideen ugu daraa codadka iyo heesaha fiidiyowyadeyda Clip?
Waxaa la yaab leh, oo aad u yaqaan Apple, codsigu wuxuu leeyahay liis yar oo dhawaaqyo dhawaaq ah in aan ku dooran karno bilaash (adigoon marin iTunes) aan dooran karno inaan raacno fiidiyowyadeena. Waxay u diiwaangeliyeen sidii ay u arkeen inay ku habboon yihiin, markaa waa inaanu dhex marnaa si aan u helno codka aan u aragno inuu ku habboon yahay baahiyaheenna.
Waxaan ku riixeynaa daruurta iCloud oo leh astaamaha soo dejinta oo u muuqda midigta heesta waana soo dejineysaa si aan ugu dari karno fiidiyowyadeena. Tani waa ikhtiyaar aad u fiican oo aan aad ula dhacsanahay taas oo ka dhigi doonta fiidiyowyadeenna xitaa kuwo gaar ah. Runtu waxay tahay inay yihiin faahfaahin yar yar taas Ka dhig Clips barnaamij codsi tafaftire ah oo noocyo kala duwan lehIntaas waxaa sii dheer, waxa umuuqda kuwa sida aadka ah nooga yaabinaya ayaa ah sida dhaqaaqa ay u dhaqaaqdo iyadoo la tixgelinayo nooca waxyaabaha ay maamusho
Wanaagsan, waan haystaa, hadda… Sideen ula wadaagi karaa curiyayadeyda Clips?
Hagaag, waxaan horeyba uheysanay waxa ugu muhiimsan, nuxurka, hada si aan ula wadaagno meesha iyo sida aan rabno, waxaan gujineynaa taariikhda aan kuleenahay geeska kore ee midig, marka hal abuurnimadeena waa nala furi doonaa. Waxaan riixi doonnaa midka aan dooneyno inaan dadka kale la wadaagno, waxaana soo bixi doona liiska aasaasiga ah, waxaan heli doonnaa ikhtiyaarka ah «Furan»Xarunta hoose, si aad u aragto; Badhanka «Play»Geeska bidix ee hoose iyo sidii had iyo jeer, geeska midig ee hoose waxaan ku leenahay badhanka«share»Kaas oo furi doona menu-ka hoos u dhaca oo aan ka dooran karno shabakadda bulshada ee aan dooneyno inaan kula wadaagno abuurkeenna Clips ama aan si toos ah ugu keydinno Reel ama iCloud Drive, markii aan dooranno.
Khiyaamada si aad uga sii baxdo Clips
Laakiin kuwani waxay ahaayeen faahfaahinta guud, hadda waxaan halkaan kuugu dhaafi doonnaa talooyin taxane ah kuwa aasaasiga ah ee kuu oggolaan doona inaad wax yar ka hesho Clips, haddii ay dhacdo inaan seegno wax faahfaahin ah:
Sideen u masaxaa fiidiyoow / sawir lagu abuuray Clips? Sidii aan uga tirtiri lahayn codsi barnaamijka loo yaqaan 'Springboard', hoos ugu dhig waxyaabaha ku jira qaybta hoos-u-dhigga oo "X" yar ayaa soo muuqan doonta oo noo oggolaan doonta inaan tirtirno.
Clips-yo fiidiyowyo / sawirro ah miyaa la weyneyn karaa? Xaqiiqdii, ikhtiyaarka ayaa ah inaad laba jeer shaashadda ku riixdo, ama aad ku qanciso adigoo kala saaraya faraha, sida aan ku sameyn lahayn kamaradda iPhone.
Had iyo jeer way kafiican tahay qabashada fiidiyowga iyada oo aan la sifeeyeynin, shaqsiyan waxaan xitaa kugula talin lahaa in fiidiyowga lasocdo marka hore kamarada macruufka caadiga ah, si looga faa'iideysto tayada kadibna fiidiyowga lagu saxo Clips.
Waa hagaag, tani waxay ahayd dhammaan ragga, waxaan rajeyneynaa inaan kaa caawinay kugu filan inaad ogaato waxoogaa yar oo Clips ah, codsigan wax ku oolka ah ee fiidiyowga ah ee Apple na soo bandhigayso, ee ha dib u dhigin mar dambe, soo qaado Clips-kaaga koowaad oo la wadaag iyaga shabakadaha bulshada, u noqo tifaftiraha waxyaabaha ku habboon sida ugu fudud iyo soon oo aad qiyaasi lahayd, iyo haddii aad taqaan xeelado badan, ku dhaaf sanduuqa faallooyinka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida Loo Isticmaalo Clip-yada Apple si Loogu Sameeyo Fiidiyowyo Cajiib ah
Waad ku mahadsan tahay macluumaadka. Waxay qiimo ku leedahay xirfadda macallinnimo
Ku jawaab Cenen
Sawir gacmeedka HD, bilaash wakhti go'an
Ku ilaalinta iPhone-gaaga muraayadda gaashaan aan la arki karin +